MAHAFINY Mil Mi-171 Rosiana Rosiana FSX & P3D - Freeware
Ity no voalohany amin'ny Freeware tsara tarehy Mil Mi-171 teratany ho an'ny FSX / P3D miaraka amin'ny sakamalaho virtoaly. Prepar3D vxNUMX mifanentana. Ny VC eto dia ny Mil Mi-4T namboarin'ny Airfilips. Ny akanjon'ny Mi-8T dia mitovy amin'ny sakan'ny Mil Mi-8. Rikoooo dia nahatonga ity helikoptera ity P3Dv4, fa ireo valizy sasany dia tokony hosoloina ireo refes (fitoviana mifanila).
Fanamarihana: Ny VC ho an'ny P3Dv4 dia dikan-jiro "maivana" ary misy ireo lasitra sasany tsy manana ahiahy satria tsy mifanaraka izy ireo. Raha ny momba izany FSX, dia mijanona ho tsy miova amin'ny tsipika Airfilips tany am-boalohany.
Ny helikoptera midadasika Mi-171 dia manana fanavaozana ho an'ny Mi-8. Ny fahaizana manan-danja sy ny endriny avo lenta dia nahatonga azy io ho helikoptera malaza voalohany eto an-tany. Ny mihoatra ny helikoptera 11,000 Mi-8 / Mi-17 dia vokarina hatramin'izao, ary ao amin'ny firenena 80 izy ireo. Iray amin'ireo helikoptera multifunctional fahita mahomby indrindra sy azo itokisana ary maharitra miaraka amin'ireo singa an'arivony miasa fiara 100 tapitrisa.
Ity helikoptera ity izay azonao ianteherana amin'ny latitude rehetra, manomboka amin'ny hatsiaka be avy any Antarctica ka hatrany amin'ny hafanana mando an'i Afrika - izay ampiasan'ny Firenena Mikambana amin'ny iraka matetika isan'andro. (Source: https://avia-russia.com/helicopter/the-mil-mi-171/)
Downloads 20 256
Noforonina 21 Aug 2019
Nohavaozina taminy 21 Aug 2019